Tuesday, 28 June 2022, 07:43
Pavel Vank) ... The small passenger jet reportedly went down as it was about to land, with differing reports of how many people were on board. Zimbabwe travel advice as military takes Robert Mugabe into custody ... More. World ... Zimbabwe army insists 'this is not a coup' as it targets top officials ... MORE ... MORE ... .
With his usual Air Zimbabwe plane unavailable, Mugabe hired a private jet to travel to Singapore for what officials described as scheduled ... .
Yahoo Daily News 20 Oct 2014
President Robert Mugabe’s wife Grace Mugabe has begun swiftly and in earnest to succeed her husband as leader of Zimbabwe, and in the past two months the she has been using the budget and the jets and helicopters of her husband to travel up and down the country in a “charm offensive” to rally support.
AV Club 14 Aug 2012
So I was traveling a lot, and one of the things that gave me great flexibility was that they didn’t go heavy into his storyline ... But they didn’t, so I had the flexibility to travel ... We shot that down in Zimbabwe, so to travel over to Africa on the Warner Bros ... And then Peter came and visited us down in Zimbabwe.
New York Daily News 04 Apr 2010
Malema denied responsibility for Terreblanche's death ... Group spokesman Andre Visagie vowed revenge but gave no details ... RELATED ... Malema on Sunday denied responsibility, during an official visit to neighboring Zimbabwe ... I'm in Zimbabwe now, I'm not linked to this.". RELATED. GHOLSTON AND CLOWNEY OF JETS TRAVEL TO HAITI TO ASSIST WITH EARTHQUAKE RELIEF ... .